Nepali Christian Bible Study Resources - अध्याय ११ - “नडराऊ, पावल”
» अध्ययन मालाहरू » प्रेरितहरूका काम » प्रेरित २१-२६
अध्याय ११ - “नडराऊ, पावल”
धेरैजसो मानिसहरू "यसपछि के हुन्छ" भनी जान्न चाहन्छन्। भोलि के हुनेछ भनी पावललाई थाह थियो र उनी नडराउनुको एउटा कारण पनि यही थियो। पावलले आफ्‍नो जीवनको बारेमा कस्तो सोच राख्थे? त्यो चैनको जीवन हुनेछ भन्ने सोच कि कष्टपूर्ण हुनेछ भन्ने (प्रेरित ९:१६)?_______________________________। पावललाई दुःखहरू आइपर्नेछन् भनी परमेश्वरले पहिल्यै बताउनुभयो र यो कुरा उनले आफ्‍नो विश्वासी जीवनको प्रारम्भदेखि नै जान्दथे। आफ्‍नो जीवनमा के कस्ता कुराहरू आउँदैछन् भनी पावल जान्दथे। येरूशलेममा उनलाई के कस्ता कुराहरू हुनेछन् भनेर सबै कुरा नै उनी जान्दैनथे (प्रेरित २०:२२), ‍तर उनी कैद गरिनेछन् र सताइनेछन् भन्ने कुराचाहिँ उनी जान्दथे (प्रेरित २०:२३ पढ्नुहोस्)।
1.	“पावल, परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा यस्तो काम गर्नुभएकोमा हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। यदि ख्रीष्टले तपाईंलाई यसरी उदेकको रीतिले बचाउन सक्नुहुन्छ भने, हामी पनि उहाँलाई हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छौं!” 2.	“पृथ्वीबाट यस्तो मान्छेलाई हटाइदेऊ, किनकि त्यो जीवित रहनु उचित छैन!”
« अध्याय १० - तेस्रो प्रचार यात्रा
अध्याय १२ - समुद्री आँधीमा जहाज दुर्घटना »